Daawo:Nidaam Automatic ah oo Loo Aaneynayo Inuu ka Dambeeyo Burburka Diyaaraddii Itoobiya.. | Baahin Media
Daawo:Nidaam Automatic ah oo Loo Aaneynayo Inuu ka Dambeeyo Burburka Diyaaraddii Itoobiya..
Mar 25, 2019 - jawaab
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhanka Afiyeshinka duulmaadka ay tahay in laga fahmo ayaa ah Xagasha weerarka , Angle of Attack.
Si aan arrinta u fududaynno kaba soo qaadday iney diyaaraddu ay soo dagayso, afkeeda horna uu dhanka sare u jeedo, laakiin diyaaraddu ay dhanka hoose u hoobaneyso maadama ay dagayso, kala duwanaanshiyaha meesha ku jira ayaa loo yaqaanna xagasha weerarka ama angle of attack, haddii xagashaasi ay weyn tahaya oo qiyaastii loogu talogalay ay ka baxdo diyaaraddu dhulka ayey u soo hoobaneysaa.
Diyaaraddu waxey leedahay qalab lagu ogaado qiyaasta xagashaas oo xiriir la leh nidaam ku xiriirsan gudaha diyaaradda, nidaamkaas waxaa loo yaqaanna Boyn MCAS oo ku cusub diyaaradaha Boeing 737 Max.
MCAS waa nidaam outomatic ah oo diyaaradda ka horistaaga iney dhulka ku soo dhacdo, nidaamkaas ayaa halka loo aaneynayo baaritaankuna uu tilmaamay burburkii diyaaraddii Liyon ku socotay October-tii hore.
Khubaradu waxey leeyihiin waxaa jira xiriir ka dhaxeeya shilkaa hore inuu la mid yahay shilka diyaaradda Itoobiya ku burbrtay.
Nidaamka MCAS marka uu dareemo in xagashada Angle of Attack uu sarreeyo afka diyaaradda waxa uu u soo daynayaa dhanka hoose si diyaaradda looga dhowro iney dhacdo, laakiin marka qalabka xagaashaa la xiriiraa aanuu shaqeyn ama si khaladan uu u shaqeeyo, nidaamka diyaaradda waxa uu ku khasbayaa iney dhulka kusoo hoobato oo si lama filaan ah ay u dhacdo, iyadoo markaa ay la filan karo arrimo aan ciribtooda la mahdin.